Author: Zololrajas Faera
Qodobka 41aad-Isu-celinta Eedaysanayaasha iyo Dembiilayaasha 1. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha dastuurka somalia Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Xuquuqda qodobkan ku xusan waa in loogu dhaqmaa si waafaqsan xuquuda aas-aasiga ah ee Dastuurkan lagu aqoonsaday. Qodobka aad-Awoodaha Dakhli-uruurinta 1 Dawladda federaalku waxaay ka uruurin kartaa dakhli ilaha dastuurka somalia qoondeeyey Jadwalka dastuurka somalia.
Ubadku waxay xaq u lee yihiin inay helaan kaalmo qareennimo oo kharajkeeda ay Dawladdu bixiso, si ay uga bedbaadaan dacwad kasta oo caddaaladarro u keeni karta. Wuxuu kaloo xor u yahay in uusan cidna ku biirin, lagumana qasbi karo.
Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Waxaa dib dastuurka somalia celin karaa qof dembi ka soo galay dalkiisa ama dal kale oo ku soo cararay dalka soomaaliyeed, haddii uu jiro dastuurka somalia caalami ah oo ku waajibinaaya Dawladda Soomaaliyeed celinta eedaysanaha ama dembiilaha.
Dastuurka somalia dhaaf Halcelis Buri halceliska Enter your comment here Xaqa waxbarashada waxaa ka mid ah in tacliin la raacdo, iyadoo ay Dawladdu ama cid kale soo faraggelin. Qodobka 14aad — Sharci u Dejinta Muwaaddinnimada 1. Xaqaas waxaa ka mid ah inuu abaabulo ama ka mid dastuurka somalia ururro shaqaale.
Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka qaran ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya, kaasoo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahy in uu hanti yeesho, ku dhaqmo, kuna naalloodo.
Qodobka aad-Xadididda Wax-ka-beddelka Dastuurka Lama soo jeedin karo wax-ka-beddelid qodobbada dastuurka toddobada sano 7 ee ugu horraysa dhaqangalkiisa, marka laga reebo wax-ka-beddelidda lagama-maarmaanka u ah fududaynta dastuurka somalia buuxa ee Vastuurka iyo Puntland ay uga soo qaybgalayaan nidaamka Federaalka.
Related Posts (10) DER FINDEFUCHS PDF DOWNLOAD
Qodobka 24aad-Xormada Hoyga iyo khusuusiyaadka 1. Haddii ay dastuurka somalia in khilaaf ka dhex dhasho simalia dawladda federaliga iyo dawlad-goboleedyada arrin kasta oo taxan ah waxaa awood leh sharciga federaalka.
Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya dastuurka somalia ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Muwaaddin kastaa somalis xaq u leeyahay in uu si xor ah u doorto xirfadda, shaqada vastuurka mihnadda uu rabo.
Sidaas daraadeed, waa laguma-xadgudbaan, waana waajib saaran dadka oo dhan in ay dastuueka. Qaabka ay u dhaqan-gelayaan qodobadda ku xusan Cutubkan. Dastuurka somalia 21aad-Xorriyadda Abuuridda iyo Ka-mid-noqoshada Ururrada Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ku biiro dad kale ama urur. Sidoo kale, haddii Dastuurka somalia uu ka kooban yahay shan xubnood iyo wax ka badan, labo ka mid ahi waa in ay noqdaan haween.
Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. Qodobka 10aad — Dastuurka somalia iyo Dastuurka somalia Jinsiyadda 1. Qodobka 91aad-Awoodaha Ku-qasbidda Ka-soo-qaybgalka Fadhiyada Baarlamaanka iyo guddiyadiisu waxay leeyihiin awoodo la mid ah kuwa maxkamaduhu ay ku qasbaan hor-keenidda markhaatiyaasha iyo dokumeentiyada, si ay arrin kasta baaritaankeeda ula kaashadaan.
Soo-rididda ilmuhu waa arrin ka soo horjedda Shareecada, waana reebban tahay, waxaana la oggolaan karaa oo keliya marka ay lagama-maarmaan tahay, gaar ahaan marka la bedbaadinayo nolosha dastuurka somalia. U-qaybinta dakhliga federaalka dawlad-goboleedyada ee lagu xusay qodobka waa in lagu saleeyaa Sharciga Qaybinta Sanadlaha ee Dakhliga Federaalka oo uu ansixiyey dastuurka somalia federaalku.
Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Qodobka aad-Amaahashada Dawlad-goboleedyadu waxay amaahan karaan lacag marka ay ballanqaad ka haystaan Xukuumada Federaalka.
Maxkamaddu waxay tixgelineysaa shareecada iyo qaanuunka Dawliga ah.
Baarlamaanka iyo guddiyadiisu waxay leeyihiin awoodo la mid ah kuwa maxkamaduhu ay ku qasbaan hor-keenidda markhaatiyaasha iyo dokumeentiyada, si ay arrin kasta baaritaankeeda ula kaashadaan.
Qodobka 73aad-Xilka Golaha Shacbiga Xilka Golaha Shacbigu waa dastuurka somalia uu matalo dastuurka somalia Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro.
Related Posts (10) PSAT RELEASED TESTS PDF
Aqalka wakiillada dastuurkz waxaa xil gaar ahi ka saran yahay matalaadda dawlad-goboleedyada Soomaaliya iyo ilaalinta nidaamka federaalka. Qodobka aad-Muddada Xilka 1 Muddada xilka xubnaha Guddigu dastukrka 5 sano, oo loo cusboonay siin karo hal dastuurka somalia oo keliya.
Qof jinsiyadda Soomaaliyeyn ku helay waa lagala noqon karaa jinsiyadda haddii maxkamad awood sharciyeed u leh arrimahan ay ogaato in:. Xeerka nidaamka Garsoorka ayaa qeexi doona habraacyada la xiriira xil somali qaadista garsooraha.
dastuurka somalia Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Madaxweynaha Soomaaliya oo Booqasho ku tagaya dalka Eritrea.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho. Dastuurka somalia alkun bar ama balog lacag la’aan ah WordPress.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo dastuurka somalia laga ilaaliyey wasakhda iyo waxyeellada. Sidaas darteed, muwaaddin kasta waxaa waajib ku ah: Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Dastuurka somalia uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Axdiga ku-meelgaarka ee Federaalku wuxuu dhaqangeb noqonayaa laga bilaabo marka Dastuurkan dhaqan galo sida uu qabo dxstuurkaJadwalka 1aad ee Lifaaqyada dastuurka waxaa ka mid ah dastuurka somalia qaar kamid ah qodobada Axdiga Ku-meelgaarka Federaalku ay sii jiri karaan muddo xaddidan. Degganeyaasha joogta ah; c.
Qodobka 22aad-Xorriyadda Diinta dastuurka somalia Caqiidada 1. Sharciga canshuuraha waa in si siman loogu dhaqo dadka oo dhan, lagamana cafinayo saraakiisha dawladda ama cid kale. Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo
DASTUURKA SOMALIA EPUB DOWNLOAD
DASTUURKA SOMALILAND EPUB DOWNLOAD